lundi, 04 juillet 2016 14:23
Sary : Njaka
Fihaonanan'ny solombavambahoaka sy ny mpanao gazety
Mbola eo am-piandrasana ny solombavambahoaka filohan'ny komisiona ny mpanao gazety, mbola tsy misy aloha hatreto ny zavatra tapaka fa miandry izay fihaonana izay. Tsiahivana moa fa raha tapaka tamin'ny zoma teo fa ahemotra ny fandinihina ilay code de la communication, dia ny sabotsy teo dia nampiantso fivoriana tsy ara-potoana ny Solombavambahoaka ny goverenemanta handinihina ilay code de la communication sy lalàna lehibe 3 hafa. Mbola hihenjana izany ny tady eo amin'ny mpanao gazety sy ny mpitondra izay manao amboletra hampandaniana ity lalàna momba ny serasera ity.
lundi, 04 juillet 2016 11:04
Mirongatra indray ny asan-jiolahy eny Andranomanalina Isotry
Raikitra ny fifampitifirana teo amin’ny mpitandro ny filaminana sy ny jiolahy omaly tokony ho tamin’ny fito ora hariva. Rehefa nifanenjika teny amin'ny elakelantrano ireto farany dia nitifitra ny mpitandro ny filaminana ka vehivavy iray sendra nandalo no voa tamin’izany. Teo amin'ny ranjon'ilay vehivavy 27 taona izay marihina fa mitondra vohoka efa ho teraka, no nifatra ny bala ka noentina avy hatrany teny amin’ny hopitaly. Nanararaotra izany ka tafatsoaka ireo jiolahy. Niverina nanao fisavana ireo mpivezivezy teny an-toerana kosa ireo mpitandro ny filaminana taorian'izay.
samedi, 02 juillet 2016 20:56
Nanainga any Toamasina ny nofo mangatsiakan'i Dada Lemama
Nody mandry ny zoma maraina 1e jolay taty Toamasina i Dada Lemama izay mpilalao baolina malaza ao amin'ny FCE (Fortior de la côte Est ) fantatry ny maro amin'ny hoe Levandana. Izy moa no Capitaine d'équipe izao namoy ny ainy izao. Nandritra ny lalao teo amin'ny FCE, nifanandrana tamin'ny Vatomandry teo amin'ny stade Minicipal TOAMASINA, diaVoadona mafy tamin'ny kiho ny andilan'i Lemama ary nitarika aretina taminy, ary natao fandidiana indroa miantaona fa izao tsy tana intsony izao ny ainy. Niainga io hariva io tao Soavita TOAMASINA moa ny Razana ary ho entina any Mandritsara. Vaky fo tokoa ireo namana sy fanakaviana ary ireo mpankafy baolina kitra satria dia mbola tanora tokoa i Dada Lemama.
vendredi, 01 juillet 2016 14:09
Hay trano tetsy Manarintsoa, Isotry : Olona telo namoy ny ainy
Trano 63 tafo no kilan'ny afo ny alin'ny alakamisy tokony ho tamin'ny 11 ora. Olona telo kosa no namoy ny ainy tao anatin'izany loza izany ka renim-pianakaviana 52 taona eo ny iray ary ankizy 13 taona sy 3 taona kosa ny roa hafa. Hatreto dia tsy fantatra mazava ny nihavian'ny afo ary tonga teny an-toerana io maraina io ny Praiminisitra sy ny vadin'ny Filoha, nanolotra fitaovana sy nampahery ireo niharam-boina izay mahatratra 242.
vendredi, 01 juillet 2016 12:19
Hiakatra ny vidin-tsolika
Raha ny filazan'ireo "station" dia hiakatra manodidina ny 200 ka hatramin'ny 300 ariary eo manomboka ny zoma 1 jolay ny vidin'ny solika amidy eny amin'ny station.
jeudi, 30 juin 2016 23:22
May Manarintsoa Isotry, Atsinanana
May Manarintsoa Isotry, Atsinanana Efa tonga eny an-toerana ireo pompier www.sobikamada.com Copyright © SobikaMada.com
jeudi, 30 juin 2016 22:18
Sambava : Gaboraraka ny fitateram-bahoaka
Mitaraina ny mpandeha fitateram-bahoaka fa tsy misy intsony ny fanomezana hasina sy ny zon’ny mpandeha hatramin'ny nisokafan’ny tsenan-davanila ny 20 jona lasa teo. Toy ny mampiditra biby ao am-bala no ampidirana ny mpandeha amin'ny fiara fitaterana ao Sambava. Hita izany isan'andro na eny amin’ny fiarakaretsaka na ny bus. Vokany, misesy ny lozam-pifamohivoizina. Dia aleo ve izany hitsabo toy izay hisoroka manoloana ity gaboraraka ity fa tena mampiteny ny moana ny fifamoivoizana ao Sambava.
Page 451 sur 514